prabhu capital limited(prabhu capital limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
प्रभु क्यापिटलले ल्यायो डबल धमाका अफर, रु. १ मै डिम्याट खाता खोल्न पाइने
काठमाण्डौ । प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले चाडपर्वलक्षित डबल धमाका अफर सार्वजनिक गरेको छ। बडादसैँ, तिहार तथा छठपर्वको उपलक्ष्यमा प्रभु क्यापिटलले आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गर्दै यो अफर सार्वजनिक गरेको हो। यस अफरअन्तर्गतमा प्रभु क्यापिटलमा दैनिक १ रुपैयाँमा डिम्याट खाता खोल्न र निःशुल्क सेयर बजारसम्बन्धी तालिम लिन सकिनेछ। प्रभु...
प्रभु क्यापिटल बन्यो १ अर्बको पहिलो मर्चेन्ट बैंकिङ्ग कम्पनी
काठमाण्डौ । प्रभु क्यापिटलले आफ्नो १३ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । आज असोज १६ गते छायाँ सेन्टर ठमेलमा अवस्थित होटल एलोफ्टमा सम्पन्न साधारण सभाले क्यापिटलले प्रस्ताव गरेको १७.६१ प्रतिशत नगद लाभांश र २२.३८८५ प्रतिशत बोनस शेयर सहित कुल ४० प्रतिशत लाभांशको प्रस्तावलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै नेपाल धितोपत्र...
कस्तो छ प्रभु सेलेक्ट फन्डको लगानीको अवस्था ?
काठमाण्डौ । प्रभु म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित प्रभु सेलेक्ट फन्डको भदौ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छ। कोष प्रवर्द्धक प्रभु बैंक र योजना व्यवस्थापक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेका यस फन्डको प्रतिइकाइ खुद मूल्य (न्याभ) भदौमा १०.३९ रुपैयाँ रहेको छ। गत साउनमा न्याभ १०.५९ रुपैयाँ रहेको थियो। भदौसम्म यो फन्डले सूचीकृत...
रिज लाइन इनर्जीले रु. २०.८२ करोडको आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल
काठमाण्डौ । रिज लाइन इनर्जी पौने २१ लाख बढी कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले अधिकृत तथा जारी पुँजी ६९ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँको ३० प्रतिशतले आउने २० करोड ८२ लाख ८७ हजार रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल २० लाख ८२ हजार ८७० कित्ता आईपीओ जारी गर्नेछ। यसैबीच कम्पनीले आईपीओ...
काठमाण्डौ । प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले आफ्नो १३ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। प्रभु क्यापिटल सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही असोज १६ गते आयोजना गर्ने निर्णय हो। सभा काठमाण्डौको ठमेलस्थित होटेल एलफ्ट छाया सेन्टरमा बिहान ११ बजेबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा चक्तापुँजीको...
विकास हाइड्रोपावरले रु. १३.८८ करोडको आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल
काठमाण्डौ । विकास हाइड्रोपावर कम्पनीले १३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बढीको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले अधिकृत तथा जारी पुँजी ४६ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने १३ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो। कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल १३ लाख ८८ हजार ५०० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। यसैबीच...
प्रभु क्यापिटलले ल्यायो ‘प्रभु लिटिल च्याम्प पीएमएस’ योजना, यस्ता छन् विशेषता
काठमाण्डौ । नेपाली पुँजी बजारमा चिरपरिचित प्रभु क्यापिटलले आफ्नो प्रडक्ट तथा सेवाहरुलाई निरन्तर ग्राहकको अपेक्षाअनुरुप विस्तार गर्दै लगेको छ। ती विभिन्न सेवा तथा प्रडक्टमध्ये प्रभु क्यापिटलले प्रदान गर्ने एउटा प्रमुख सेवा लगानी व्यवस्थापन सेवा हो। यसअन्तर्गत हाल महिला लगानीकर्तालाई मात्रै लक्षित गरेर यसपालिको तीजका अवसरमा प्रभु...
लगानी व्यवस्थापन सेवाअन्तर्गत प्रभु ऐश्वर्य योजना सुरु, यस्ता छन् सुविधा
काठमाण्डौ । प्रभु क्यापिटलले लगानी व्यवस्थापन सेवाअन्तर्गत नयाँ प्रोडक्ट प्रभु ऐश्वर्य योजना आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ। नारीहरुको महान चाड तीजको विशेष अवसर पारेर नारीहरुलाई केन्द्रित गरी उनीहरुको आर्थिक सशक्तीकरण र वित्तीय स्वतन्त्रतामा सहयोग पुर्याउन यो योजना सहयोगी हुने अपेक्षाका साथ प्रभु ऐश्वर्य योजना सञ्चालनमा ल्याइएको...
प्रभु स्मार्ट फन्ड निष्कासनको अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन
काठमाण्डौ। प्रभु म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालनमा हुने ‘प्रभु स्मार्ट फन्ड’ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। योजना व्यवस्थापक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले यो फन्ड निष्कासनको अनुमति माग्दै गत साउन २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएमा यस योजनाका ८ करोड इकाइ निष्कासन गरिनेछ। अर्थात यो...
प्रभु क्यापिटल र त्रिवि केन्द्रीय व्यवस्थापन विभागले सहकार्य गर्ने, यस्ता छन् उद्देश्य
काठमाण्डौ। विद्यार्थीलाई वित्त तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्नेलगायतका विषयमा सहकार्य गर्न प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय व्यवस्थापन विभागबीच आज एमओयू सम्पन्न भएको छ। प्रभु क्यापिटलको सभाहलमा एक कार्यक्रमबीच सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा प्रभु क्यापिटलका प्रबन्ध निर्देशक...
मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरले रु.२२.८ करोडको आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल
काठमाण्डौ । मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले जारी पुँजी ७६ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत हुन आउने २२ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल २२ लाख ८० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। जसमा आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि ७ लाख ६० हजार...
प्रभु क्यापिटलले ल्यायो ‘समर डिम्याट स्किम’, १ वर्षका लागि ‘फ्री’ डिम्याट खाता र मेरो सेयर
काठमाण्डौ । नेपाली पुँजी बजारमा चिरपरिचित प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले ग्राहकलाई डिम्याट सेवाअन्तर्गत नयाँ डिम्याट योजना ‘समर डिम्याट स्किम’ आज साउन १० गतेबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले १ वर्षका लागि ‘फ्री’ डिम्याट खाता र मेरो सेयर प्राप्त गर्न सक्ने छन्। यो योजना यही साउन ३२ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रभु...
काठमाण्डौ । प्रभु क्यापिटल लिमिटेड युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएको छ। सेयर रजिस्ट्रारसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु क्यापिटलबीच सम्झौता भएको हो। २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले २ वर्षका लागि प्रभु क्यापिटललाई सेयर रजिष्ट्रारमा...
प्रभु क्यापिटलका कर्मचारीलाई एकदिने लिडरसिप तथा मोटिभेसन तालिम
काठमाण्डौ। नेपाली पुँजी बजारमा अग्रणी क्यापिटलका रुपमा पहिचान कायम गरेको प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि एकदिने टिम बिल्डिङ तथा मोटिभेसनल तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। हिजो शनिबार काठमाण्डौको ग्रान्ड नोर्लिङ होटेल तथा रिसोर्टमा एक्जिओम नेपालको सहयोगमा तालिम कार्यक्रम...